एमाओवादी बहिष्कारले उब्जाउने नयाँ चलखेल | Infomala
भनिन्छ- एक पटकको संविधान सभाले संविधान नबनाएपछि दोस्रो संविधान सभा कुनै देशमा सफल भएको छैन । दोस्रो संविधान सभाका निम्ति खिरारे सरकार स्थापित गरियो, र चुनाव हुने नहुने शंकैशंका रहे पनि अन्ततः निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर एमाओवादीले परिणाम स्वीकार गर्न अनिच्छा व्यक्त गर्दै संविधान सभामा भाग नलिने धम्की दिएपछि देश-विदेशमा अनिश्चयको बादलले ढाकेको छ । एमाओवादीले भाग नलिएमा संविधान बन्ला ? बने पनि त्यो दीर्घजीवि होला ? वा संविधान सभाले संविधान बनाउने नेपाली-सपना सपना मै सीमीत हुने हो त ?
एमाओवादी शान्ती प्रकृयाबाट टाढीने कुरामा कसैलाइ विश्वास छैन, न यसको नेतृत्वले नै यो विषय उठान गरेको छ । तर, मुलुकमा बखेडा चलिरहने श्रृँखला भने नरोकिने हो की भन्ने आशंकाले बास गरीरहेको छ । प्रचण्डले जारी मतगणना रद्द गरी ‘धाँधली र षड्यन्त्र’को छानबिन नगरे एमाओवादीले चुनावको नतिजा स्वीकार नगर्ने र नयाँ संविधानसभामा हिस्सा नलिने घोषणा गरेका छन् । एमाओवादीले नयाँ निर्वाचित संविधानसभासँग सबन्ध नराख्ने स्पष्ट संकेत दिएपछि भावी संविधानसभाको सान्दर्भिकतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत चिन्ता देखिन थालेको छ। बिहीबार एकाबिहानैदेखि भारतीय राजदूतदेखि जिम्मी कार्टरसम्म प्रचण्डलाइ फकाउन/सम्झाउन लागी परेका छन् । एमाओवादीले सहभागिता नजनाएमा के संविधान सभाको औचित्य रहला ?’ विदेशीहरूले उठाउने प्रमुख सवाल यही बनेको छ ।
प्रचण्डले अहिले बोलेका कुरा भावावेशमा आएर हो भने यो मनको तीतो मात्र हुन सक्छ र सबैले आफ्नो साइज बुझेर संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढ्न पनि सक्छ । समानुपातिकको सीट बाँड्दा एमाओवादीको उपस्थिति नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने नै बन्छ । त्यस्तै, यस अघि एमाओवादीसँग नेगोसिएसनमा अल्झिरहने काँग्रेससँग एमालेले पहिले जस्तो लुरू लुरू व्यवहार नगर्ने स्पष्टै छ । एमालेको स्वर चर्कने प्रष्ट छ । एमाओवादी कतातिर ढल्कन्छ भन्ने कुराले राजनीतिमा नयाँ चलखेल शुरू हुनेछ ।
Previous Postफेसबुके चुनाव
Next Postराष्ट्रपति र राजदूतहरुको प्रचण्डलाई मनाउने प्रयास